World Media Coverage About Jawar Mohammed the Super Intelligent Young Oromo human Right ACTIVIST Kichuu
HomeAfaan OromooTVWorld Media Coverage About Jawar Mohammed the Super Intelligent Young Oromo human Right ACTIVIST
World Media Coverage About Jawar Mohammed the Super Intelligent Young Oromo human Right ACTIVIST .THEY GAVE HIM RECOGNITIONS .MOVE FORWARD BRO LET THE NEO MINILIK ELITES MAD DOGS KEEP BARKING .
Guul Doon Qanciye
Suura kana ilaalaa
Dheengadda biyya Ameerikaa, kutaa #Atlaantaatti hawaasni Oromoo Jawar wajjin walgayii qabu turan. Warri jibba Oromoo qaban, warri gaafa Oromoon mataa ol qabatu mataan bowwaafatu immoo wal guuranii Jawaariin mormuuf dhufan. Alabaa Minilik fannifatanii galma fuulduratti yaa’an. Warri kan ‘keenyaa’ garuu kunoo akkasittiin alaabaa Oromoo uffatanii, uffata aadaatiin miidhaganii kolfaa, bashannanaa fuuldura jaraa darban. Hin arrabsine, nyaara hin guurre, itti hin iyyine. Bilchinni keenya sadarkaa kanarra ga’eera!
▪︎Warra si jibban duratti hin boo’iin. Hin waciin, qaawwa kees itti hin agarsiisiin…
▪︎Bashannani, nyaaraan tuqi, itti kolfii bira darbi!
▪︎Golatti deebi’ii walitti himi, walitti dheekkami, wal gorfadhu!